12 Mawebhusaiti ekuti Uwane Zvinogadzira Zvigadzirwa zveDropshipping - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
12 Mawebhusaiti ekuti Uwane Zvinogadzira Zvigadzirwa zveDropshipping
Tumira zuva 06 / 11 / 2020
Iyo bhizinesi modhi yekudonhedza iri nyore kwazvo kupfuura mazhinji emamwe e-ezvokutengeserana mabhizimusi mamodheru, iwe unowana maodha kubva kune vatengi, ipapo vatengesi kana vamiririri vanozotarisira zvese, iwe unogona kutarisa kushambadzira zvigadzirwa zvako uye kuwedzera bhizinesi rako. Izvo zvaunosarudza kutengesa zvinoverengeka zvakanyanya kuti iwe unobudirira here kana kuti kwete. Ichi chinyorwa chinogovana gumi nemaviri akajeka mawebhusaiti ayo anogona kukubatsira iwe mukuvhima zvigadzirwa zvinoenderana
Iwe unotengesa, isu tinowana uye tinokutumira iwe. Izvo zvinogona kuitwa neCJ Kudonhedza zvinopfuura izvi. Chigadzirwa kurudziro ndeimwe yemasevhisi eCJ. Pane peji reimba, pane zvigadzirwa zvakasarudzwa nemaoko mumichero yakasiyana, zvigadzirwa zvinoyerera, uye zvitsva zvigadzirwa zvinokurudzirwa, pamwe nezvakakurudzirwa zvigadzirwa zvawakagadzirirwa nekutengesa kwako niche uye kutsvaga.
Kunze kwepeji repamba rinoratidzwa, CJ iri kugadzirisa mavhidhiyo ezvekurudziro yechigadzirwa nguva dzose, zvigadzirwa zvinokurudzirwa zvakasarudzwa nemaoko nevanyanzvi vechigadzirwa. Uye iwe unogona kuwana zvigadzirwa zvechigadzirwa zvezvinhu zvinochinja zvemahara, izvo zvinosanganisira vatengesi vakanyanya, zvigadzirwa zvakanyorwa kwazvo, uye zvigadzirwa zvine mukana mukuru, nezvimwe zvakafanana neruzivo rwechigadzirwa.
Kutanga neCJ Kudonhedza ne $ 0
Ecomhunt iyi webhusaiti yehunyanzvi kubatsira e-yekutengesa bhizinesi mamhanyi kutora zvigadzirwa. Iwe uchawana zvigadzirwa pane ino webhusaiti zvinosangana neese maficha echigadzirwa chakakodzera kudonhedza. Saka iri webhusaiti kuunganidza zvigadzirwa zvinodonhedza zvirikutengesa, muchidimbu ruzivo senge kumahombekombe, zvitoro zvese zvinotengesa zvigadzirwa, zvichingodaro zvezvigadzirwa. Asi kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo senge Facebook kushambadzira, kunongedza kana zvinongedzo, iwe unofanirwa kubhadhara kuti uwane pro pro nhengo.
Kune vamabhizimusi e-vekutengesa, Facebook haisi yemagariro chete, asi zvakare ipuratifomu yekuisa kushambadzira kwezvigadzirwa zvavo, makosi, kana zvitoro. Kumhanya kushambadza kweFacebook ndiyo yakasarudzika nzira yekukweva traffic uye kushandura kuita maodha senge anodonhedza, zviri nyore uye zvinokurumidza kudzoka. Izvo zvigadzirwa e-zvekutengeserana bhizinesi vamhanyi vanosarudza kumhanyisa Facebook kushambadza inowanzo kuyedzwa kuti ive yakanaka inobatsira zvigadzirwa, saka iri nyore uye inoshanda nzira yekuti iwe uwane zviri kuitika paFacebook.
Ungawana sei zvigadzirwa paFacebook?
Bhurawuza pane iyo Nhau Yekudya peji, iwe unowana imwe inotsigirwa Push, senge kushambadzira kwekudonhedza zvigadzirwa, uye iwe unogona zvakare kuteedzera e-yekutengesa maposta, ipapo iwe unogashira yakawanda uye yakawanda yemhando idzi dzeashambadziro Push.
Instagram uye Pinterest ndedzimwe sarudzo mbiri, iwe unogona kuteedzera mamwe ma promo mapeji, uye ongorora nguva dzose izvo zvigadzirwa zviri pane kushambadzira.
Ipapo isu tinokurudzira FindNiche, chishandiso chakasimba chekudonhedza kwauri kuti uongorore zvigadzirwa zvinobatsira zvine mukana wekudzoka kukuru pane mari. Iyo ine kugona kuongorora pamusoro pemamirioni matanhatu Aliexpress zvigadzirwa mune makumi mashanu ezviuru niches uye inovhara pamusoro pe6 dzakasiyana Shopify zvitoro. Iwe ungafadzwa nehukuru hwayo dhatabhesi uye kugona kwedata kugona. Saiye muridzi weCommerce chitoro muridzi kana anodonhedza, FindNiche yaizovabatsira kuti vatsvage nezvechigadzirwa uye vawane inobatsira niche. Iyo inyanzvi yekuongorora chishandiso chakavakwa nehunyanzvi hwekuvandudza matekinoroji mune yanhasi bhizinesi redhijitari uye yakaratidzirwa kuve inobatsira kune vakawanda vanotanga kutsvaga kupinda nekukwikwidzana muCommerce indasitiri.
Parizvino, yakatanga kubhadharisa muripo, asi iwe uchiri kukwanisa kubhadhara $ 1 kuti uwane yemahara muedzo, uye hauzopotsa maficha ayo ane simba.
Iwe hauna mukana wekuti usati wambonzwa nezve Aliexpress kana iwe uri e-yekutengesa bhizinesi mumhanyi. Kune imwe nhanho, Aliexpress mukwikwidzi wedu, asi isu hatina hanya nekurumbidza Aliexpress pano nekuti mumwe nemumwe wedu ane edu akasimba mapoinzi. Imwe yakasimba pfungwa yeAliexpress ndeyekuti huwandu hwese hwezvigadzirwa paAliexpress hwakakura, kutaura chokwadi, zvakanyanya kupfuura izvo zvigadzirwa paCJ App. Asi, isu tine chimiro chekufukidza hutera uhwu, isu tine chigadzirwa chekutsvaga basa, kana iwe wawana chigadzirwa chaunoda kunyora kuchitoro chako, tinogona kukunyorera nekukutumira paCJ App kwauri, kazhinji nemutengo wakaderera, ndosaka vatengi vazhinji vanotanga neAliexpress asi vatendeukire kwatiri kuti tiwedzere.
Seizvo zita rayo, Odditymall iri rakanakisa webhusaiti kuti uwane chimwe chinonakidza uye chakakosha, tinogona kuona kuti zvigadzirwa pane ino webhusaiti hazvioneke muzvitoro zvakajairika. Asi hafu yezvigadzirwa hazvina kukodzera kudonhedza nekuti zvakakurisa, mari yekutumira inodarika bhajeti.
Pane ino webhusaiti, unogona kutarisa pasi rese saiti inozivikanwa chinzvimbo chese cheShopify chitoro.
Chii chatingaite nenhamba?
Kune epamusoro Shopify zvitoro zvinotengesa zvigadzirwa zvinodonhedza, izvo zvinobudirira kwazvo kudonhedza zvitoro zvine traffic yakawanda. Sarudza kunze kwezvitoro izvi, uko zvingangoita zvishanu muzvitoro zviri pamusoro zana maererano nenhamba dzakaomarara, uye unosora zviri kutengeswa pazvitoro izvi. Chero bedzi vari zvitoro zvinobudirira, ivo vanofanirwa kuve neakasarudzika maonero pamusoro pekutora zvigadzirwa, zvingave nyore kuteedzera epamba-basa kubva kune yakatwasuka-Mudzidzi?
Amazon ndeye webhusaiti yakakura yekuwana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nema niches. Zviri nyore kwazvo uye zvakajeka kuwana zvigadzirwa zvinokunda paAmazon nekuti Amazon inoita kuti ive mushandisi-inoshamwaridzika. Kune akawanda ma tag pasi pekutsvaga bar, sevanotengesa zvakanyanya, madhiri anhasi, kuburitswa kutsva, nezvimwe zvakadaro. Iwo anotengesa zvakanyanya anovandudzwa paawa, iwe unogona kuatarisa neakananga sub-niches, kuiswa kwacho kwakanyatsojeka uye kwakajeka, unogona kuwana zviri nyore zvigadzirwa zvaunofarira. Ini ndinokurudzira zvikuru maMovers & Shaker, peji rino rinoratidza vanowana hukuru mukati. nzvimbo yekutengesa pamusoro pemaawa makumi maviri nemana apfuura, unogona kuwana zviri kuitika pano.
Sezvinoonekwa paTV yakaita senge chitoro cheAmazon, iwe ukabaya chigadzirwa chaunofarira, uchaenda kuAmazon kune icho chigadzirwa. Seizvo zita resaiti, zvigadzirwa zviri ino saiti chimwe chinhu chaungaone paTV, saka zvizhinji zvechigadzirwa iwe unogona kuwana anokwezva kwazvo mavhidhiyo ekushambadzira. Uye zvese zvigadzirwa zvinokodzera kudonhedza, mitengo yacho inokodzera, uye hukuru hwakanakira kutumira. Uye ino saiti inoisa zvigadzirwa muzvimedu gumi, imba, kicheni, kunze, nezvimwe zvakadaro, idzi niches gumi dzinenge dzakanyanya kupisa niches pakudonhedza.
Icho chakabudirira kwazvo chitoro chakadonhedza pasi. Iko kushanya kwemwedzi kune ino saiti ndeye 2M, inoshamisa traffic. Saka zvigadzirwa zviri ino saiti zviri zvechokwadi kuhwina zvigadzirwa. Kubva pane menyu, tinogona kuona kuti pane zvikamu zvina, kicheni, imba, runako, uye hutano, unogona kuwana akawanda emagetsi pano.
Zvigadzirwa pane ino saiti zvinokurudzirwa muzvinyorwa. Imwe posvo inokurudzira muunganidzwa. Ini ndinofunga zvirevo zvakaita serumwe rudzi rwevashambadziro, saka vatengesi vanobhadhara vanyori kuti vawedzere izvo zvinongedzo zvechigadzirwa kuzvinyorwa zvavo. Saka izvo zvakakosha kushambadza. Vanhu vanomhanya kushambadza kwezvigadzirwa zvine mukana mukuru, saka ino saiti yakanaka kuti iwe uone kuti ndezvipi zvigadzirwa zviri kufamba. Iko kushanya kwemwedzi kune ino saiti ndeye 601k, uye traffic iri kumusoro, saka ino saiti yakanaka yezvigadzirwa zvekuvhima.
SaAliexpress, aya maviri mawebhusaiti ari kuitwa naAli Group, China. Zvakanakira nzvimbo mbiri idzi, zvisingaverengeki zvigadzirwa zvinyorwa uye tsvina mitengo yakachipa, kunyanya 1688, vazhinji vevatengesi vepakutanga kudonhedza kubva muna 1688, saka vane mutengo wepasi. Asi ivo havana hushamwari kune vashandisi vekunze kwenyika, vashoma chete vatengesi vanotsigira kutumira mhiri kwemakungwa, uye nguva yekutumira haisi kuvimbisa, nekuti iwo maodha anofanirwa kumirira kuendeswa kana vasvika padiki mari yekutumira. Uye vazhinji vevatengesi havagone kutaura Chirungu, saka zvinonetsa kutaura.
CJ yakagadzira chishandiso chakanakisa kubatsira vashandisi kutsvaga kana kutenga kubva ku1688 & Taobao nekungodzvanya-gadza CJ Google Chrome Kuwedzeredzwa, ipapo unogona kutumira kukumbira kana kutenga chikumbiro kuCJ nekudzvanya kamwe chete, CJ ichawedzera chigadzirwa kuCJ pamusika. uye kukuzivisa iwe kuti unyore kana kuitenga. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve mashandisiro echishandiso, ndapota tarisa iyi vhidhiyo.
Tags aliexpress, Amazon, cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, dropshipping, Kudonhedza kukunda zvigadzirwa, ecomhunt, Facebook, zvichemo, trending zvigadzirwa, kupi kwekuwana zvigadzirwa zvinokunda
← Kugamuchirwa kuCJ POD → Chii chekutengesa munaNovember? Yakakwirira Kudiwa Niches & Zvigadzirwa Kurudziro